BAATH MUTU ROG
निशुल्कको उपदेशमा शून्य जाँगर । ।
ज्ञान र सीप सिकाउन भत्ताको ब्यबस्था गरिएका अनेक कार्यक्रम छन् नेपालमा । सरुवा रोग नियन्त्रणमा ठूलो राशिको बजेट खर्च गरिएको छ बर्षेनी । निशुल्कमा ज्ञान कसले लिन्छ दिन्छ र ! त्यो सम्भव पनि देखिन्न । मलाई भने यो बाथ मुटु रोगले निकै आकर्षित गर्ने गरेको छ । तर यसका लागि कतै ट्रेनिङ र बजेट छुट्याइएको भएपनि आजसम्म थाहा छैन मैले ।
बाथ मुटु रोगको सुरुवात घाँटी दुखाइबाट सुरु हुने गर्दछ । घाँटी दुखेको १ हप्तामा सन्चो हुन्छ र ३ ४ हप्तामा ज्वरो आउने, सरी सरी घुँडा दुख्ने ,छाती दुख्ने आदि हुन सक्छ । जुन बाथ रोगका लक्षण हुन् ।यो बाथ रोग “ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोक्कस “ नामक ब्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा हुने गर्छ । यसले गर्दा घाँटी दुख्ने हुन्छ र यसको बिरुध्वमा शरीरमा बनेका “अन्टिबडिले” गर्दा नै बाथ रोगमा देखिने लक्षण देखा पर्ने गर्छ । समयमा उपयुक्त यन्टिबायटिकको प्रयोग गरेमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । यसले बिशेष गरी हाम्रो जस्तै बिकासोन्मुख मुलुकका ५ देखी १५ बर्ष उमेरका बच्चाहरुलाई समाउने गर्छ । अन्त्यमा मुटुका भाल्बहरु बिग्रिने हुन्छ । जुन स्थायी रुपमा बिग्रिन्छ ।
“ डाक्टर साप । बाथ रोगको जस्तै लक्षण लिएर बच्चा आएको छ । हजुर कता हुनुन्छ होला । “ भन्दै बेला बेला फोन गर्नुहुन्छ स्वास्थ्यसंस्थाबाट साथीहरुले । सल्लाह माग्न फोन आउने गर्छ ठाउँ ठाउँ बाट । मलाई यसरी फोन आउँदा निकै खुशी लाग्ने गर्छ । यसको बारेमा जनचेतना निकै कम रहेको छ । तर यसको बारेमा चेतनामुलक कार्यक्रम चित्तबुझ्दो छैन । सरकारले आँफै कर लगाएको र जानी जानी चुरोट खानेहरुलाई हानिकारक चुरोट खान हुन्न भन्नलाई नियमित बजेट होला । तर अन्जान गरीब बिरामीको मुटु रोगको स्थिती अप्ठेरो बनाउने बाथ रोगको कार्यक्रम भने छैन । मैले नदेखेको र कसैलाई जानकारी भएमा कृपया जानकारी गराइदिनुहोला । तर मुटु रोग लागिसकेपछि उपचार गर्न निशुल्कका कार्यक्रम भने छन् !
गुल्मी जिल्ला अस्पातलमा भर्खर भर्खर सुरु भएको थियो मेरो पहिलो सेवा । सम्झना छ अझै मलाई गुल्मी स्याउवा भन्ने ठाउँकी एउटी १४ बर्षिय किशोरी । रातो बिट हरियो कुर्ता सुरुवाल लगाएर खोक्दै आएकी थीइन् । र स्वाभाबिक लाज मान्दै टुसुक्क टुलमा बसेकी थिइन् । आँखा पनि रसिला थिए । सबैले गर्ने भाईरल ज्वरोको अनुमान । जे सोध्दा पनि छोटो उत्तर मात्रै दिन्थिन् । घरमा जती चकचके भएपनि अस्पतालमा बोल्न धक मान्ने ग्रामीण भेगका बच्चाहरुको बिशेषता नै हो। त्यसमाथि किशोरअवस्था टेकेको केही बर्ष लाजले बोली नै नफुटेको प्रतीत हुन्छ ।
खोकी लागेको केही दिन भएको रहेछ उनलाई । पहिले पहिले पनि घाँटी दुख्दा अदुवापानी जडिबुटी आदि खाएर ठीक भएको रहेछ । बेला बेला भाईरल भनेर औषधी पनि मेडिकल र अस्पातलबाट सेवन गरेकी रहिछन् । बिरामीको भिड थियो । ति नानीको बोल्ने जाँगर नभएपनी मलाई भाईरल भनेर पठाउन मन लागेन । अनि जाँचेर हेर्दा बाथ मुटु रोग लागिसकेको रहेछ । र त्यसलाई प्रमाणित गर्न र कति असर गरेको रहेछ भनेर पत्ता लगाउन बुटवल पठाएको थिएँ । फर्केर एक हप्तापछि उनी आउँदा मैले शंका गरेको मिलेछ । उनलाई बाथ मुटुरोग लागेको रहेछ । हरेक एक्काईस दिनमा “पेनिसिलिन” सुइ नित्य रुपमा लगाउनुपर्ने भएछ ।
ती १४ बर्षिय किशोरीको एक दिन बिहे हुनेछ । त्यतिखेर सम्म मुटु रोगको अवस्था पनि अहिलेको भन्दा जटिल हुनेछ । बिहे पछि आमा बन्ने रहर अवस्य हुनेछ ।आमा बन्नुपुर्व सहि चिकितसकिय सल्लाह भएमा धेरै जटिलता नाआउला पनि । तर सामान्य अवस्था जस्तो सजिलो भने पक्कै हुनेछैन तिनलाई । जोखिमपूर्ण अवस्था हेरेर गर्भ नबोक्न पनि सल्लाह दिनुपर्ने हुन सक्छ । कस्तो बिडम्बना । यति सोच्दै उनलाई बिदा गरेको थिएँ मैले ।
त्यसपछि त सधैं चनाखो हुन प्रेरणा जाग्यो । बाथ रोग पत्ता लगाउन मलाई । समयमा पत्ता लगाउन सके जटिल अवस्थामा पुग्न बाट बचाउन सकिने हुँदा यो रोग नछुटोस भन्ने सधैं मनासपटलमा घुमिरहन्थ्यो । शायद छुटेका पनि छैनन् होला । मैले आशा गरेभन्दा बढी नै रहेछ यसको समस्या । यसको बारेमा सामान्य जानकारी हुनुपर्ने ब्यक्तिमा पनि नभएको पाएँ मैले । त्यसैले पहिले मेडिकल बिधा पढ्नेहरुमा जानकारी गराउन पर्ने लाग्यो । अनि नजिकको सि. यम. ए पढाई हुने कलेजमा समय मागेर १ घण्टामा अ हे व /अ न् मिको मस्तिष्कमा अनेक तरहले भर्ने प्रयास गरेँ । अरु ट्रेनिङहरु चलिरहेको बेलामा पनि बिचमा केही समय निकालेर मिलेसम्म यसको बारेमा भन्ने गरेको छु मैले । यो राम्रो फोरम थियो सबै माझ यसको महत्व उजागर गर्नका निम्ती । एक दिन सरकारी कार्यक्रम बन्ला र भत्ता बाँडेर चेतना फैलिएला भनेर पर्खिने हो भने त जुग नै बित्ने !
शायद त्यसैको परिणाम होला । अहिले समय समयमा फोन आउँछ बिभिन्न स्वास्थ्यसंस्थाहरुबाट । जे होस्। बालबच्चाहरुमा बिशेष देखिने यो बाथ रोग समयमा नै पत्ता लाग्न थोरै भएपनि टेवा पुगेको छ भन्ने महसुस हुन्छ । जुन पर्याप्त छैन । यो चेतनामूलक जानकारी स्कुलका शिक्षकमा र ८ ,९ कक्षामा पढ्ने बिध्यार्थीमा पनि गराउन सकियो भने अझै प्रभावकारी हुने थियो। जुन मैले गर्न सकिन । बजेट भएन । शायद त्यसैले कसैको साथ पनि भएन । त्यसैले त भन्छु निशुल्कको उपदेशमा जाङर कहाँ देखिन्छ र! सबैको भलो होस् । नव बर्षको शुभकामना ।
२०७५ बैशाख १ गते